Kidnapping karana: ankitifitifitra tany Toamasina, votsotra, omaly, i Arman Kamis | NewsMada
Navotsotr’ireo jiolahy naka an-keriny azy, omaly tolakandro, ilay teratany karana, tale jeneralin’ny orinasa TransFy any Toamasina. Tsy nijanona hatreo anefa fa raikitra ny fifanenjehana sy fifampitifirana teo amin’ireo jiolahy sy ny mpitandro filaminana.
Naharitra adiny iray ny firefodrefotry ny poa-basy. Nanakatom-baravarana avokoa ny mponina ao amin’ny Cité Trano mora Tsarakofafa Toamasina Suburbain. Fantatra, hatramin’ny ora farany nanoratanay halina, fa mbola mifampitady amin’ny alalan’ny tifitra tsy ifandrenesana ao anaty ala ao Tsarakofafa ny zandary sy ireo jiolahy telo lahy tafaporitsaka miaraka amin’ny basy mahery vaika. Avotra ihany, araka izany, i Arman Kamis, teratany karana filoha tale jeneralin’ny orinasa Trans Fy etsy Ampasimazava – Toamasina, raha nisy naka an-keriny ny 21 novambra 2018 lasa teo tao amin’ny birao fiasany eny Ampasimazava. Enina andro aty aoriana, nahitam-bokany ny ezaka vitan’ny zandary tamin’ny alalan’ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimariam-pirenena ao amin’ny faritra Atsinanana, ny Kly Ranaivoarison Théodule. ”Tsy ilaina ny fanomezam-bola ireo mpaka an-keriny raha ohatra ka misy hatrany ny fiaraha-miasan’ny fianakaviana sy ny mpitandro filaminana”, hoy ity manamboninahitra ambony ity. Raha ny angom-baovao, ny zoma 23 novambra 2018 no niantso ny fianakaviany ireo mpaka an-keriny nitaky volabe manodidina ny 4 miliara Ar, saingy nilaza ho tsy manana izany kosa ny fianakavian’i Arman Kamis.
Kalachnikov iray sy ”chargeur” efatra…
Andaniny kosa, nisy loharanom-baovaon’ny zandary ka niasa mangina izy ireo. Vokany, ny asabotsy sy alahady teo, nahazo loharanom-baovao roa samy hafa ny zandary, saingy mitovitovy avokoa ny angom-baovao rehetra voarain’izy ireo.
Nametraka ny paikady rehetra teo am-pelatanany ny zandary ka efa nihantsona vao maraina teo amin’ny toerana misy ireo jiolahy. Raikitra avy hatrany ny fifampitifirana raha vao nahatazana ireo zandary ireto jiolahy. Vokany, azo sambo-belona ny iray raha tafaporitsaka kosa ireo namany. Tratra tany amin’ilay jiolahy ny basy Kalachnikov iray miaraka amin’ny ”chargeur” efatra feno bala avy. Mendri-piderana, araka izany, ny ezaka vitan’ny Kly Ranaivoarison Théodule sy ireo mpiara-miasa aminy. Marihina fa isan’ireo manamboninahitra nahavita nandrava ny asan-dahalo tany amin’ny faritra atsimo, indrindra tamin’ny andron-dRemenabila, ny Kly Ranaivoarison Théodule.